रामसमझले ल्याएको तरंग – Everest Dainik
कैलालीको क्षेत्र नं.५ मा अहिले रामसमझ रानाको निकै चर्चा छ । हप्ता दिनअघि मात्रै उनीसहित माओवादी केन्द्रका नेता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि उनको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको हो । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय महादिबेशन आयोजक समिति सदस्य समेत रहेका राना अचानक कांग्रेस प्रवेशले बाम गठबन्धन कैलालीमा एक प्रकारको हलचल मच्चाएको छ । जनयुद्धमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएका राना एक्कासी कांग्रेसमा छिर्दा उनको व्यापक आलोचना समेत भएको छ । उनी निकट कार्यक्रताले सामाजिक संजाल मार्फत विभिन्न टिप्पणी प्रस्तुत गरि रहेका छन् ।
पैसा खाएर कांग्रेसमा प्रवेश गरेको भन्दै गठबन्धनका कार्यक्रताले टिप्पणी गरिरहेका छन् । पटक–पटक माओवादीले रानालाई अवसर दिँदा पनि अहिले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कांग्रेसमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । चुनावको मुखमै कांग्रेसमा गएकाले रानालाई पैसाको आशमा प्रवेश गरेको भन्ने पनि कम्ती छैनन् । यदि जानु नै थियो भने चुनावको मितिअघि नै किन प्रवेश गरेनन् त, कार्यकर्ताको प्रश्न छ ?
हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावमा १० हजार बढी भोट पाउँदै उनी तेस्रो भएका थिए । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कैलालीका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हाशिल गरेको थियो । तर, २०७० मा भने त्यो शाख जोगाउन सकेन ।
सो निर्वाचनमा एक क्षेत्रमा मात्रै चित्त बुझाउन बाध्य भयो । केही महिना अघिमात्रै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र २ स्थानीय तहमा विजयी भयो । २०७० मा धनगढीमा नराम्रो तरिकाले पराजित भएको माओवादीले स्थानीय तहमा केही सुधार ल्याएको थियो । माओवादी तलमाथि भइरहेको बेला अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै उम्मेदवार बनेका व्यक्ति अरु पार्टी प्रवेश गर्दा आसन्न चुनावको नतिजा कस्तो होला ? यसको जवाफ त यहि मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनले नै छिनोफानो गर्ला । हुन त गठबन्धनका एकथरी कार्यकर्ता रामसमझ पार्टी प्रवेश गर्दैमा फरक पर्दैन भनेर पनि अभिव्यक्ति जनाइ रहेका छन् । तर, असर भने पक्कै पर्छ । यसको नतिजा आउने नै छ ।
सम्बन्धित् समाचार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले फेरि ढॉट्यो
राना समुदायमा लोकप्रिय ठानिएका राना एक्काशी किन कांग्रेस प्रवेश गरे त भन्ने प्रश्न निकै चर्चामा छ । उनी नजिक एकथरि कार्यक्रताले रानाले चुनावमा हारेर पैसा गुमाएकाले त्यो असुल गर्न गएका भनेर आरोप लगाइ रहेका छन् । भने, अर्कोथरीले पार्टिले रानाको गुनासो नसुनेर । जे जस्तो भए पनि रासमझले धनगढीको चुनावी माहोल तताएको छ । अहिले उनलाई चिन्ने हरेकले फेसबुक स्टेटस पोष्ट गरि रहेका छन् । स्टेटसबाट नै उनीबारे दोहोरि चलि रहेको छ । उनी विरुद्ध टिप्पणी लेख्नेले यति उति पैसा खाएर पार्टि प्रवेश गरेको भनेर लेखि रहेका छन् भने, उनी समर्थित व्यक्तिले कहाँ र कति पैसा खायो भनेर प्रमाण खोजि रहेका छन्।
आफूले चित्त नबुझेमा अर्को पार्टिमा जाने अधिकार जो कोहीलाई हुन्छ । आफ्नो धारणा तथा विचार जोसँग मिल्छ त्यही संगठनमा गएर काम गर्नु सजिलो पनि हुने भएकाले जानु नै उपयुक्त हुन्छ । तर, पैंसामा बिकेर पाटि परिर्वतन भने गर्नु हुन्न । लामो समय एउटा पाटिमा योगदान दिने तर कुनै आशा देखाउने वित्तिकै प्रवेश गर्ने प्रवृति अहिले हाबी भएको छ ।
राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो पाटिमा छँदा निकै राम्रो व्यक्ति हुन् । तर, अरु पाटिमा जाने वित्तीकै खराबको ट्याक दिने चलन जस्तै बनेको छ । अहिले पनि सामाजिक संजालमा त्यस्तै देखिन्छ । स्थानीय चुनावमा रामसमझ बाहेक कोही विकासप्रेमी छैन भनेर नै समर्थन गर्ने व्यक्ति अहिले रामसमझ हामीमाझ रहनेनन् भनेर फेसबुक स्टेटस पोष्ट गरिरहेका छन् । अजिब छ राजनीति । सायद अहिले चुनावको मुखमा रामसझले कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुले कत्तिको असर पर्छ भनेर गठबन्धनभित्र छलफल चलिरहेको छ होला । नत्र भने किन आउँछन् त निरन्तर फेसबुक स्टेटस ?
समझको अर्थ हुन्छ जान्ने, बुझ्ने तथा सम्झने । उनले आफ्नो नामको आधी शब्दको अर्थ बुझेर यो निर्णय गरे वा प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको आश्वासनले ? यो कुरा रामसझले नै जानुन् । शुरुमा प्रचण्डसँग टिकटका लागि गुहार गरेको तर प्रचण्डले अब अरुलाई पालो दिनुपर्ने भनेर रामसझलाई नदिएको बजारमा हल्ला छ । टिकट नपाएकोले रामसमझको चित्त दुखिरहेको चाल कांग्रेस सभापति देउवाले थाह पाएको र त्यही समय रानाले देउवाको आश्वासन पाएकाले माओवादी केन्द्र छोडेको पनि हल्ला सुन्न पाइन्छ । किन छोडे होला त रामसमझले पार्टी भन्ने पश्नको उत्तर पनि बजारमा नै सुन्न पाइन्छ । जे जति कारणले उनले पार्टि छोडेको भए पनि क्षेत्र नं पाँचमा निकै तरंग ल्याएको छ ।
सम्बन्धित् समाचार प्रदेशसभाको बैठकको तयारी तीव्र
मसँग फोनमा कुराकानी गर्दा रामसमझले भन्दै थिए, “माओवादी केद्रले मलाई उपेक्षा गर्यो, टिकटका लागि आश्वासन दिएको भए पनि लास्टमा नाम हटायो अनि मन दुखेर पार्टी प्रवेश गर्नु पर्यो ।” कैलाली–कञ्चपुरमा राना थारुको बसोबास भएपनि माओवादीले नहेरेकाले कांग्रेस छिरेको रानाको तर्क छ । अब तपाईको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ भनेर सोध्दा ? उनले भने,“सकेसम्म कांग्रेसले स्थान दिने नै छ यदि कांग्रेसले पनि माओवादी कै हर्कत देखाएमा पाटि छोडेर खेती किसानी गर्छु ।”
हुन त रामसझले पनि सोचेका होलान् कांग्रेसमा आफूभन्दा बलिया तथा लामो समय देखि संघर्ष र अबसर नपाएका व्यक्ति छन् । उनले कसरी सोच्न सके होलान् छिट्टै अबसर पाउछुँ भनेर ? अहिले चुनावको मुखमा प्रधामन्त्री देउवाले राजनीतिक खेल पो खेलि रहेका छन् भनेर उनले सोच्नु पथ्र्यो कि ? तर, उनमा यो सोच्ने शक्ति नै आएन । पार्टिमा लामो समय देखि योगदान दिइ रहेका व्यक्तीलाई देउवाले पाखा लगाइ रहेका बेला के विपक्षी पार्टिबाट छिरेको व्यक्तिलाई अबसर देलान् र ? यी यावत प्रश्न रामसझले गहिरीएर मनन् गर्नु पथ्र्यो लाग्छ । देउवाको भुलभुलयामा फसेर अब रानाको राजनीतिक भविष्यमा पूर्ण विराम लाग्ने सम्भावना प्रवल बनेर आएको धेरैको विश्लेषण छ ।
इमान्दार, मिहिनेती, साधारण व्यक्तिको छबी बनाएका रामसमझ हठात् पार्टि प्रवेश गर्नाले उनी भित्रभित्रैका चतुर रैछन् भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ । लामो समयदेखि एउटा पाटिमा विताउने अनि चुनावका बेला अर्को पार्टी प्रवेश प्रवृतिले कयौंको राजनीतिक भविष्य संटकमा परिरहेको उदाहरण रहेका बेला रानाको पनि त्यस्तै हालत पो हुने हो कि ? क्षेत्र नं पाँचबाट आरजुलाई जसरी पनि निर्वाचीत गर्न अहिले देउवाले “साम, दाम, दण्ड, भेद” को निती अख्तियार गरिरहेका छन् भन्ने धेरैको आरोप छ । चुनावको मुखमा अताल्लिने प्रवृतिले यस्ता शंका सिर्जना गर्नु स्वभाविक नै हो । अहिले एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडिरहेकाले देउवा विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहेका छन् । यसैको स्वरुप हो रामसमझ पार्टी प्रवेश गर्नु भनेर विपक्षी दलका कार्यक्रता आरोप लगाइ रहेका छन् । तर, रामसझ भने यो कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “बजारमा आएका जति पनि हल्ला छन् तिनमा सत्यता छैन । मैले पैसाको आश्वासनमा पार्टी प्रवेश गरेको होइन । माओवादीले मलाई बुझ्न सकेन अनिमात्रै पार्टी परिर्वतन गरेको हुँ ।”
सम्बन्धित् समाचार कैलालीमा हावाहुरीले मतदान प्रभावित, २५ प्रतिशत मत खस्यो
निर्वाचीत पछि खासै अनुहार नेदेखाउने नेताको प्रवृतिलाई छिनोफानो गर्न जनता मसिर २१ को प्रतिक्षामा बसि रहेका छन् । यहाँका जनताले कसलाई विजयी गराउलान् त ? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामो छ । चुनावमा पैंसाले भोट किनबेच असाध्यै हुन्छ भनिन्छ । जसले पैंसा बाँड्न सक्यो उसैले जित्छ भन्ने हल्ला धेरै छ । अब यस्ता हल्लालाई मतदाताले चिर्नुपर्छ । अनि, योग्य तथा निर्वाचीत क्षेत्रको बारे सोच्ने व्यक्तिलाई छान्नु पर्छ । क्षेत्र नं पाँचमा त्यस्तो व्यक्ति को छ भनेर मतदाताले मनन् गरिसकेका छन् ।
जे जति कारणले राम समझले पाटि परिर्वतन गरे त्यसको दुरगामी असर पर्छ या पर्देन माओवादीले आँकलन गर्न जरुरी छ । उनी नहुँदा र हुँदाको अवस्था पार्टिले महसुस गर्नु पर्छ । क्षेत्र नं.५ मा जिल्लाका अन्य क्षेत्र भन्दा रौनक धेरै छ । चुनावको मिति नजिक आएसंगै त्यो रौनकले उग्र रुप लिएको छ । दल तथा तिनको उम्मेदवार अन्तिम कसरत मा रहेका छन् । यहि मौकामा नेताहरु कार्यक्रता पार्टि प्रवेश गराउन व्यस्त पनि देखिन्छन् । यही बीचमा रामसझ पनि परे भने हुन्छ भनेर धेरैको टिप्पणी छ ।
ट्याग्स: kailali, lokesh dhami